Klub Psychology - सेतोघोडा : एक कदम अगाडी , हरेक दिन : September 2015
नेपालको झिनो आशा : भारत र चीनको नियति
चीनको नियत पनि त्यती नेपाल मैत्री देखीदैन किनकी नेपालसँग भन्दा धेरै ब्यपार उ भारतसँग गर्दछ । करीब करीब ७१ अर्ब डलर बराबरको ब्यपार यी दुई बिच सन् २०१४ मा भएको थियो र भारतले ३७ अर्ब डलर बराबरको ब्यपार घाटा ब्यहोरेको थियो । चीनले करीब ५४ अर्ब डलर बराबरको निर्यात भारत तर्फ गरेको थियो भने भारतले जम्मा जम्मी १६ अर्ब डलर बराबरको निर्यात चीन तर्फ गरेको थियो । अब फाईदा छोडेर चीन भारतलाई चिढ्याउला त ? पक्कै पनि अहिलेको स्थीतिमा उ भारतलाई चीढाएर ब्यपारीक घाटा खान चाहँदैन । चीन जस्तो देशले चाह्यो भने कुनै पनि नाका एक हप्ता भित्र खोलीदिन सक्छ , र उ सँग त्यो प्रबिधि र सामथ्र्य पनि छ । हालको लागी उ पनि हेर र कदम चाल भन्नेमा रणनिति लिएर बसेको छ ।
तर उ नाकाहरु खेल्नका लागी दशैंसम्म पर्ख भन्छ । बाबा , चीन माथि नेपालको भन्दा भारतको धेरै प्रभाव छ , भलै केही स साना मुद्दाहरु पनि उनीहरु अल्झिएका छन् । तर उनीहरुको ब्यपारलाई त्यसले खासै असर पार्दैन । हालको चीन निति लड्नु भन्दा पनि ब्यपार गर्नु र प्रतिष्पर्दा गर्नुमा जोड देखीन्छ । नेपालमा उ त्यती ठूलो बजार र खर्चन सक्ने क्रेता देख्दैन जती भारतमा उ त्यहाँको मध्यमा बर्गका लागी समान ओसार्न आतुर छ । हामी त भुगोल र जनसंख्या दुबैले ठगीएका नागरीक हौं ।
अब नेपाल र नेपाली मनोबिज्ञानले पनि ब्यपार र प्रतिष्पर्दालाईनै बिजय शास्त्रको रुपमा बुझ्नु श्रेयकर देखीन्छ ।
भारत र चीनलाई हामी चाहिएको होईन , नेपाललाई उनीहरु चाहिएको हो । हामी परनिर्भर र निरह भएर छट्पटिएको मनोबिज्ञान अझ उद्देलित बनाएर उनीहरु रमाउन चाहन्छन् । त्यसैमा उनीहरुले रमाएका पनि छन् । अब क्यालकुलेटर लिएर सामानको मोलमलाई गर्ने ब्यपारीहरुले नेपालको राष्ट्रियताको झिनो अहं बाचई देलान् भन्नु र सोच्नु मुर्खता सीवाय केही होईन ।
चीनको भर नपर्न र आत्म निर्भर कसरी हुन सकिन्छ भन्नेमा हामीले कदम चाल्नुमा बुद्धिमानी देखीन्छ । केटौले पारामा कहिले भारतीय च्यानल बन्द गर्नु त कहिले नेपालीको यो नैतिक युद्धमा चीनले सहयोग गर्ला भनेर ठिङ्ग उभिनुु हाम्रो निरह मनोबिज्ञानको बुद्धिबिलास मात्र हो । यसैपनि यो युद्ध र युद्धपोतले बिजयी बन्ने भन्दा पनि सुचनाले संसार जीत्ने युग हो । कहाँनेर प्रतिद्व्न्दीलाई माथा टेकाउने डाटा भेटाउन सकिन्छ त्यो थाहा पाईरहनु पर्छ र त्यसका माध्यमहरुलाई साथ लिनैपर्छ । यसैले सुचनाहरु र त्यसका माध्यमहरुलाई कहिल्यै निषेध गरीनु हुँदैन । त्यसो गर्दा परस्पर घाटा हामीलाईनै हुने देखीन्छ । अब भारतीय टि भि च्यानल होईन नेपाली नेताहरुलाई भारतमा या अन्य कुनै सहयोगी देशहरुमा सलामी टक्राउन जान बन्द गरीदिउँ । अब नेपाल आत्मनिर्भर बन्नै पर्छ ।
यसैपनि चाईनाको परराष्ट्र निति अरु देशको आन्तरीक मामलामा हस्तछेप नगर्ने भन्ने स्पष्ट छ नै । भारतको बल मिचाई बिरुद्धको युद्ध केवल हामी नेपाली मात्रको समस्या हो ।
हो भुपरेवेष्ठित राष्ट्रिको हिसाबले ब्यपार र ओसार पसारको लागी पाउनु पर्ने समुन्द्रसम्मको निवार्ध मार्ग र पारवहन सुबिधा नेपालले पाउनुपर्छ । तर संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यो मुद्दालाई भारतीय चस्माले हेर्ने निश्चित प्राय छ किनकी भारतले राष्ट्र संघमा हामीले भन्दा धेरै खर्च गर्छ भलै राष्ट्र संघिय शान्ती सेनामा नेपालको भारतको भन्दा ठुलो साख छ । तर जे होस् यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने बेला भईसकेको छ । भुपरेवेष्ठित राष्ट्रको समस्या माथी भारतले खेलाची गर्न मिल्दैन । भारतसँग सीधा कुरा गर्ने र दब्ने होईन । उसका पनि हाम्रा भन्दा धेरै समस्याहरु छन् र हामी पनि उसलाई चेप्न सक्ने धेरै कोंणहरुमा छौं । हाम्रो शान्ती प्रतिको आस्थालाई उनीहरुले कमजोरी नसम्झिंदा राम्रो हुन्छ ।
You can "Like" and comment at our facebook page : https://www.facebook.com/Klub-Psychology-266227932653/timeline/
Posted by klubpsychology.blogspot.com at 8:36 PM 1 comment:
अधिकार , पहिचान र संघियता
दलीतहरु त संघियता बिरोधी हुनुपर्ने हो । सबै जात जातीका प्रतिनिधि पात्रहरु मिलेरै यीनिहरुको दलन र दोहोन गरेकै हुन् । अब जात जातको आधारमा संघियताको सिमा कोरीए न्यायको लागी उनीहरु उजुर लिएर कहाँ कहाँ जाने ? कता कता मात्र आफ्नो कुन , कुन अधिकार र माग खोज्न पुग्ने ? कहाँ मात्र न्यायको लागी आफ्नो उपस्थीति देखाउने ?
फेरी संघियताले दिने टाकुरे , ढिकुरे राजाहरुको प्रदेशमा यिनीहरुको दलन हुने सम्भावना झनै बढेकै छ किनकी स्पष्ट छ , सिङ्गो कानुन हुने छैन । यही कुरामा केही थपघट गरेर थारुहरु र तामाङ्गहरुमा पनि लागु हुन्छ , भलै उनीहरु माथि छुवाछुत जस्तो जघन्य भेदभाव नभएको होला । अब कुलदेवताको पूजामा जस्तो थान थुम्का खोज्दै हिड्ने होईन । मन्दिर बनाउने हो जहाँ सिङ्गो नेपाली जातीले कर्मको पूजा गर्न पाओस् । जहाँ कुनै पनि भगवान तेरो मेरो नहोस् , सबैलाई दर्शन मिलोस् , सबैको समृद्धि मात्र होस् ।
आजकल नयाँ नेपालमा मान्छेहरु अधिकार , अधिकार , पहिचान , पहिचान नामको बकम्फुसे मन्त्र मात्र भट्याएको सुन्छु । त्यसैको कृपाबाट बिसंगति , बन्द र बन्धन , हत्या र हाहाकार जुरेको भेट्छु । यसो गर्दा हुँदैन , जो सीत जे धेरै छ त्यही लिंदा दिंदा हुँदैन –
बाहुनबाट शिक्षा , क्षेत्रीबाट सुरक्षा , नेवारबाट ब्यपार , जनजातीबाट संस्कृती , थारु र लिम्बुबाट भेषभुषा , दलितबाट कला र कर्म , ज्यापूबाट श्रम , तराईबाट खटन , शेर्पाबाट शीखर , आदि , ईत्यादी साटपाट गरेर अनि त्यस खीचडीबाट द्वन्द नामको भुष केलाएर , झिकेर , अधिकार नामको आगो बाल्दा के होला ? स्पष्ट बुझ्दा , जातीयताले घटाउने हाम्रो अधिकार र पहिचान होे । अधिकार बढाउने हो साथी , घटाउने होईन । बेलैमा सजग बनौं ।
हामी नेपालीहरु साँच्चैनै सोचे भन्दा धेरै चलाख छौं । यति त गर्न सजीलै सक्छौं , होईन त मिज्जुहरु ?
फेरी जीम्मेवारी बोकौं साथीहरु , जीम्मेवारी । जम्मै बारी होईन ल । उखान टुक्काले फेसबुकमा धेरै लाईक पाए जस्तो जीन्दगीमा नंबर कहाँ पाईन्छ र मिज्जु । एकता र त्यसमा मिहिनेत परे पछि मात्र आफु संगै देश बन्ने अनि अघि बढ्ने हो ।
यसैपनि साथीहरु , यो बैश्यहरुको युग हो । यहाँ जे कुरा पनि बिक्छ र आम्दानी हुन पाउनु पर्छ । पहिचान , पहिचान मात्र जपेर न त पहिचान बाँच्छ , जोगीन्छ , न कसैले त्यसको महत्व बुझ्छ , न त बिकास नामको आम्दानीनै हुन्छ । भएको पहिचान बाँचौं , सबै नेपालीलाई बुझाउँ , बाँच्न लगाउँ , सम्मान दिउँ र पाउँ , खुशीयाली मनाउँ , दुनिया बोलाउँ अनि नाम , दाम , साथी र संसार कमाउँ । सकेलालाई साम्भा बनाउँ , नेपालका जात्राहरुलाई कार्निभल , दशैंमा प्रकृती रीझाउँ , तिहारमा दिदी भाई , लोसारमा सोच नयाँ बनाउँ , माघिमा दासता हटाउँ , बुद्ध पूणीमामा चेतना उठाउँ , साथी , चेतना । पर्यटकहरु बेलाउँ , गरीबि हटाउँ , दाम कमाउँ साथी , दाम ।
बिद्वान मान्छेहरुले आफ्नो सोच र जीन्दगीलाई सधैं सरल बनाउने प्रयास गर्छन् । हामी नेपालीहरुले पनि त्यसो गर्दा कसो होला । आँट्यो भने नेपालीले जे पनि गर्न सकछ । त्यस पछि त के प्रकृतीले सुन्दर बनाएको यो देशमा एकता र मिहिनेत पर्यो भने सम्पन्नता नै सम्पन्नता उम्रीन्छ । जीउँदै स्वर्ग देख्न कहि जानै पर्दैन , नेपालमै आए पुग्छ । होईन त मिज्जु ?
यस पालिको दशैको लागी बिदेशबाट आयतीत संघियता नामकोे च्याङग्रा छ्याक्क पारेर बलि दिने मेसो मिलाएको छु । बिजयादशमीको टिका लगाएपछि त्यसैको कवाफ खुलाउँछु । तिहारमा त्यसैको सुकुटी सित तोङबा पनि पिलाउँला । सबै नेपालीलाई स्वागत छ ।
फेरी तपाईहरुले पनि यो जातीय संघियताको लोभी सोचलाई मनको बिर्को बन्द गरेर सद्भावको सिट्ठी बजाउन नभुल्नु होला । यसलाई पकाएर खाईएन भने सबैलाई राजनैतिक कब्जीयत या त डाईबिटिज हुने सम्भावना बढी देखीन्छ । देशको भलो हुने देखीदैन । संघियताको झोल तिते गुलीयो छ र त्यती रसीलो पनि छैन । यसैले पनि यो जातीय गुलीयोको लोभलाई छिट्ट्रै सकाउँदैमा नै हामी सबै नेपालीको कल्याण हुने देखीन्छ । बिखण्डनकारी कमिला लाग्ने डर पनि हुँदैन ।
तिज , दशैं , तिहार ,
छठ , उभौली –उँधैली ,माघि , लोसार ,
बर्ष नयाँ , नयाँ बिचार ,
सबै मनाउँ साथी , सबै मनाउ ,
रमाउँ न , हाम्रै आफ्नो राम्रो संस्कार ,
आउ अब गाउँ देशभक्तिको गीत अपार ।
अग्रीम शुभकामना ।
Posted by klubpsychology.blogspot.com at 8:47 PM No comments: